I-Luxury 2 Bedroom House e-West Coast - I-Airbnb
I-Luxury 2 Bedroom House e-West Coast
Port Louis, Rivière Noire District, i-Mauritius
Kungakhathaliseki ukuthi uhlelo lwakho luwukuphola futhi ujabulele indlela yokuphila yasesiqhingini noma ungumuntu ohambahambayo ofuna ukwenza okwengeziwe ngokuhlala kwakho, indlu yethu esanda kwakhiwa enamagumbi okulala angu-2 iyindawo ekahle yokuhlala kwakho eMauritius.
Itholakala esifundeni esisogwini sePointe Aux Sables, uhamba ibanga elide ukusuka ogwini lolwandle futhi useduze nezinye izindawo ezibalulekile zesiqhingi njenge-Port Louis, i-Bagatelle ne-Flic en Flac nokunye.
Siyazibophezela ekunikezeni izihambi ezidumile iMauritius eyaziwa ngayo.
Indawo ephephile enemindeni enobungane kakhulu nxazonke.
Kukhona i-supermarket eyi-10 imizuzu yokuhamba ukusuka endlini.
Indawo yolwandle eseduze iyimizuzu eyi-10 kuye kweyi-15 yokuhamba yize ingeyona edume kakhulu. Kodwa-ke kancane kunedolobhana elidumile lase-Albion elaziwa ngendawo yalo yolwandle kanye namaloli okudla endawo futhi kuwuhambo lwemoto lwemizuzu engu-15 ukufika kulo. Endleleni ungama endlini yesibani eseduze :)
Ngeshwa angikho lapho ngokwenyama, kodwa abazali bami bahlala esitezi esiphansi sebhilidi futhi bahlala bebizelwa lutho nganoma yini esingabasiza. Nokho ngiyatholakala nganoma isiphi isikhathi ngenkundla yemiyalezo ye-Airbnb futhi ngizoxhumana ngaphambi nangemva kokuhlala njalo :)
Ngeshwa angikho lapho ngokwenyama, kodwa abazali bami bahlala esitezi esiphansi sebhilidi futhi bahlala bebizelwa lutho nganoma yini esingabasiza. Nokho ngiyatholakala nganoma isip…